Aros Energy fanambarana holaviko mihitsy mpanofa | Holmbygden.se
Aros Energy fanambarana holaviko mihitsy mpanofa
Posted on 26 Novambra, 2013 ny Holmbygden.se
Aros Energy fanambarana terminates mpanofa ho an'ny Iraka Review Report tatitra. Solontenan'ny orinasa tolotra ho an'ny Fikisahana ny fialokalofana Board Accommodation telefaonina ny Östersundsposten, fa tsy misy olona te-hamaly fanontaniana.
Rehefa Aros Energy fanamarinana lohataona farany dia naniraka ny fitiavana ho amin'ny fifindra-monina Service for fialokalofana ilaina, ankoatra ny hafa. ny. Holm Tobo Uppsala ivelan'ny nanao izany amin'ny trano izay efa velona ny olona. Nandritra ny vanin-taona mafana, dia niezaka hahazo mpanofa in Holm amin'ny fomba hafa. ANDRAMO mba hanao toy izany koa teo amin'ny Tobo, na mpanofa dia manana fifanarahana sy ny zo hijanona.
Last Alarobia i Anjara hamerina ny tatitra momba ny zava-misy ny mpanofa tany Tobo tena fanararaotana in Aros Energideklarationers trano. Michael Sterner ny orinasa no milaza eo amin'ny fandaharana mba hanomboka ny fifanakalozan-kevitra ary hitondra mba ny fahadisoana. Tsy araka ny tatitra Arbetarbladet diniky tsara fa Aros Energy fanambarana izao fa tsy te nandroaka mpiasa in Tobo. Association mpanofa mijoro izao ny mponina lafiny.
Ny dingana ny manipy avy ny mpanofa fantatra avy Holm. Marcus Hamberg izay ny ankamaroan'ny tompon'ny Aros Energy fanambarana na dia nandroaka ny zokiny indrindra tamin'ny Holm mpanofa tamin'ny taon-dasa. Na dia nonina teo izy hatramin'ny nanana ny kaominina ny fananany, izy dia voatery ny Marus Hambergs orinasa Fagerhyltan mba handao ny tranony tao Holm. In fotsiny 20 andro, dia ho lasa.
- Tsy te-hifindra satria niaina ny fiainako rehetra tany Holm, hoy izy.
20/4 2012 ST: Nu töms husen i Holm Read more about ny mpanofa izay nariana.
Nanoratra ihany koa omaly Östersundsposten maro lahatsoratra ny Aros Energy fanambarana ary ny iray toko, Firma Tea Widéen. Amin'ny toerana maromaro ao amin'ny manodidina County, ireo orinasa roa nitady fialokalofana manao veloma ho zavatra ilaina. Araka ny drafitra leases tsy ampy na orinasa sy ny asa ny fananan 'ny fialokalofana zavatra ilaina, na dia efa voasoratra fa izy ireo no tompon'ny ny Soedoa Fikisahana Board.
RIP niantso Fikisahana Board Torohevitra miasa Kent Juhlén ary manontany raha toa nefa tsy ho hitany izany hafahafa. – “efa, Heveriko. Izany dia amin'ity tranga ity ny fanambarana diso”, rehefa hitany hoe. Kent Juhlén milaza fa ny Fikisahana Board naman'ny orinasa.
RIP koa dia injao fa ny Tea Widéen, fa avy eo dia namaly kosa Teas Pia Karlsson vavy avy any Bracke. A Pia Karlsson amin'ny Bracke an-telefaonina ihany koa ny fifandraisana olona for Aros Energy fanambarana sy Bracke iray ihany Pia Karlsson.
Mandria am-piadanana manontany raha izy izay ny Pia Karlsson Aros Energideklarationers fitiavana.
- No., fa tsy ahy, mifanaraka Pia.
- Tsy afaka mamaly, Tsy fantatro izay Aros Energy fanambarana ireo ka tsy mahalala izay tena miresaka momba, Hoy i Pia Karlsson.
Pia Karlsson sy ny tompony teo aloha “Skandalhusen” in Holm Johan Stendahl niara-nanana zavatra ilaina eo anoloan'ny fialokalofana ao Hälsingland izay natao nakaton'ny ny fanafintohinana, anisan'izany ny VAT handraisam-bola sy ny Payroll hetra.
Links ny lahatsoratra
20/11 SR P4 Uppland: Zavatra ilaina amin'ny Skolvägen “Miala ny trano ianao na latsaka kokoa adrift” Henoy ny onjam-peo tatitra momba ny trano, dia nanazava fa mety ara-pahasalamana.